Ungazi Kanjani Uma Umuntu Ekuvimbele KuWhatsapp 2021
Uma uthumela othile imiyalezo ye-WhatsApp, kodwa ungatholi zimpendulo, ungahle uzibuze ukuthi uvinjelwe yini. Yebo, i-WhatsApp ayiveli ngokusobala futhi iyasho, kepha kunezindlela ezimbalwa zokuyithola.
Bona Imininingwane Yokuxhumana ku-Chat
Into yokuqala okufanele uyenze ukuvula ingxoxo kuhlelo lokusebenza lwe-WhatsApp lwe-iPhone noma i-Android bese ubheka imininingwane yokuxhumana phezulu. Uma ungasiboni isithombe sabo sephrofayili nokugcina kwabo ukubonwa, kungenzeka ukuthi bavimbele wena. Oxhumana naye kungenzeka usanda kukhubaza umsebenzi wakhe wokugcina ukubonwa.
Zama ukuthumela imiyalezo noma ukushaya ucingo
Uma uthumela umlayezo ngandlela thile ukuthi ngubani okuvimbile, irisidi lokulethwa lizokhombisa umaki owodwa kuphela. Imilayezo yakho ngeke ize ifinyelele ku-WhatsApp.Uma ubathumelele imilayezo ngaphambi kokuba bavimbe, uzobona ama-checkmark amabili esikhundleni salokho. Ungazama futhi ukubashayela ucingo. Uma ikholi yakho ingangeni, kusho ukuthi kungenzeka ukuthi uvinjelwe. I-WhatsApp izokufakela ucingo, futhi uzoyizwa ikhala, kepha akekho noyedwa ozobamba ngakolunye uhlangothi.
Zama ukubangeza eqenjini
Lesi sinyathelo sizokunikeza uphawu oluqinisekile. Zama ukudala iqembu elisha ku-WhatsApp bese ufaka oxhumana naye eqenjini. Uma i-WhatsApp ikutshela ukuthi uhlelo lokusebenza alukwazanga ukwengeza umuntu eqenjini, kusho ukuthi bakuvimbele.